Obbo Barakat Simoon qabeenya ummataa qisaasessuun shakkamanii to'annoo jala oolan - BBC News Afaan Oromoo
Obbo Barakat qondaaltota ADWUI angafoota keessaa tokko
Obbo Barakat Simooniifi Obbo Taaddasa Kaasaa qisaasa qabeenya dhaabbata Xirat dabalatee dhaabbiilee biroo keessatti raawwatameen shakkamanii akka qabaman Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Naannoo Amaaraa beeksise.
Komishinarri komishinichaa Obbo Ziggaale Gabayyoo isaan to'achuuf ajajni mana murtiiti bahuu isaafi sababa qisaasa qabeenyaa uumameen dhaabbileen shan kasaaraa fi idaa keessa seenu isaanii himaniiru.
Gurgurtaan warshaa biiraa Daashin dhimmoota Obbo Barakat yakkaan itti shakkaman keessaa dha. Hoggantoota lamaan alattis malaammaltummaan kan shakkaman akka jiran qondaalli kuni himaniiru.
Yakka malaammaltummaa raawwatame irratti qorannoon dabalataa kan barbaachisu ta'ullee ragaaleen argaman himata hundeessuu kan dandeessisani dha jedhaniiru.
Hogantoonni lamaan Obbo Barakat Simooniifi Obbo Taaddasa Kaasaa guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee yeroo walfakkaataatti mana jireenyaa isaaniitii to'annoo jala oolan.
'Haqa argatu jedhee hin yaadu'
Dhimmuma kanarratti waan itti dhagahame BBC'tti kan himan qondaalli olaanaa ADWUI fi Ministirri duraanii Obboo Geetaachoo Raddaa, ''Qabamuun jara kanaa hedduu na dinqe,'' jedhaniiru.
Sababa kanaas wayita himan, akka miseensa olaanaa dhaabichaatti Barakatiifi Taaddasaan namoota kaan caalaa, maqaansaanii malaammaltummaatti ka'uun hedduu na ajaa'ibe. Haa tahu malee isaa bakka bu'ee haasa'uu hin danda'u, jedhan.
Akka nama tokkotti qabamuun jarreen kanaa sodaa yoo itti uumee jiraate kan gaafataman Obbo Geetaachoo, ''Lakkii! Sodaa tokkollee hinqabu. Haatahu malee, himata sobaa banuun na himachuus danda'u,'' jedhaniiru.
Dabaluunis, ''Haqa ni argatu jedhee hin yaadu. Akka kootti, namni tokko mootummaa qeequusaatiin qabameera taanaan, haqa argachuun waan yaadamu miti,'' jedhaniiru.
Obbo Barakat Simoon aangoo gadi dhiisuuf iyyatan
Hagayya bara darbe Koreen Giddu Galeessaa Sochii Dimookraatawaa Saba Amaaraa, kan amma Paartii Dimookiraatawaa Amaaraa jedhamu, hoggantoota lamaan Koree Giddu Galeessaa dhaabichaa keessaa dhorkee ture.
Isaan garuu sababni ''itti dhorkamneef bu'uura hinqabu,'' jedhanii turan. Isa qabeenyi qisaasa'eera jedhuufis, ''Ofiif osoo hin jedhiin uummata Amaaraaf qabsaa'aa jiraanne'' jechuun BBC'tti dubbatanii turan.
Obbo Barakat Simoon: ''Sababni ittifamneef bu'uura hin qabu''
Nama MM duraanii Mallas Zenaawwiitti dhihaatanidha kan jedhaman Obbo Barakat, Ministira Beeksisaa ta'uu dabalatee Giddugala Qo'annoo fi Qorannoo Imaammataa Itoophiiyaatti Ministira dame Indastirii ta'uun tajaajilaa turaniiru.
Waggaafi ji'a lama dura aangoo gadin lakkisa jedhani boodarra itti deebi'uun isaaniis ni yaadatama.
Dhihoo waraqaa qorannoo Naannoo Tigraay Maqaleetti dhiheessaniin mootummaa amma jiruufi haala biyyattiin keessa jirtu haalaan qeeqanii ture.
Obbo Taaddasa Kaasaan hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata Xirat Korporeet tahun kan hojjetan yoo tahu Obbo Barakat Simoon immoo Walitti Qabaa Boordii turan.
Dhaabbati Xirat Korporeet dhaabbata misoomaa naannoo Amaaraa keessatti hundaa'edha.
Mootummaan Itoophiyaa Hojii Gageessaa MeTec dabalatee hoggantoota 70 ol tahan malaammaltummaafi sarbama mirga namoomaan shakkuun to'annoo seeraa jala oolchuun isaa ni yaadatama.
Barkat Sim'oon: Sababni ittifamneef bu'uura hin qabu
Paartiin Badhaadhinaa deeggartoota yaada Obbo Lammaa ofirraa dhiibaa jiraa?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 16 Amajjii 2020
OBN sagalee Obboo Lammaa ugguruun gaazexeessitoota mufachiise
Yeroo dhuma kan haaromfame: 7 Caamsaa 2020
Dr Milkeessaa Miidhagaa aangoorraa kaafaman
Yeroo dhuma kan haaromfame: 27 Bitooteessa 2020
'Kana booda mul'ata omaa hin qabnu'-jiraattota Beerut